Ọ bụ Smartphone Revolution! Ị dịla njikere? | Martech Zone
Chetara ụbọchị ndị naanị ejiri ekwentị anyị akpọ ndị enyi na ndị ezinụlọ anyị? N'oge a, enweghi ọtụtụ ihe anyị nwere ike iji ekwentị anyị, gụnyere ịzụ ahịa, ụlọ akụ, njikọ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Smartphones na-eme ka ndụ anyị dị mfe, nke ahụ bụ eziokwu.
N'ezie, ngwaọrụ ndị a na-eme kwa ụbọchị, ndị a na-ahụ kwa ụbọchị aghọwo ihe a ma ama nke na ọtụtụ na-ebu amụma na ọnụ ọgụgụ ekwentị ga-aka ndị mmadụ n'oge na-adịghị anya, na ahịa adịlarị na ahịa. Yabụ kedu ihe mgbanwe ekwentị a pụtara maka azụmaahịa?
Dabere na infographic a, ọ bụ ngwa ndị na-arụ ọrụ kachasị na-eweta nkwado nke ama. Ma ọ bụrụ na onye ọrụ smartphone na - ebudata ngwa 12, ọ na - eche na azụmahịa gị kwesịrị isonye na mgbanwe ahụ. Ebe ọtụtụ mmadụ na - eji ekwentị ha maka njikọ dijitalụ, ntanetị na ntanetị na nyocha, ọ ga - abụrịrị ebe azụmahịa gị na ụlọ ahịa ngwa.
Ọzọkwa, na ọtụtụ ndị mmadụ na-atụgharị na ekwentị mkpanaaka ha maka atụmatụ ndị a dị ukwuu, a na-ebu amụma na ịzụ ahịa mkpanaka site na smartphones ga-akwụ ụgwọ $ 163 ijeri ahịa zuru ụwa ọnụ site na 2015. N'ụzọ doro anya, ọ nweghị ịkwụsị mgbanwe a. Ekwenyeghi? Lego anya na stats na infographic a:
Ihe omuma ihe a bu ihe ndi ozo site na GlobalTollFreeNumber.com
Tags: dijitalụ couponụlọ akụ ntanetịUsoro QRnyochaasmartphoneama ndi mmaduama ama
Salsa maka nonprofits: Fundraise, Advocate, Communicate